(L) အသက် ၄၀ မပြည့်သေးသောစစ်တမ်း - порသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဘဝကိုပျက်စီးစေသလား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အောက်မှာ-40 စစ်တမ်းရှားပါး (L ကို): Porn ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးသလဲ?
ငယ်ရွယ်မဲဆန္ဒရှင်များ၏ 33 ရာခိုင်နှုန်းကညစ်ညမ်းတဲ့အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းကပြောသည်စဉ်လေးဆယ်ရှစ်ရာခိုင်နှုန်း, သူတို့ကနှောင့်အယှက်မပေးခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ဆယ်ကိုးရာခိုင်နှုန်းမသေချာခဲ့သညျ။
မေးခွန်း 40 အောက်မှာသာဖြေဆိုသူစစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့ပထမဦးဆုံးအ-of ယင်း၏-မျိုးရှားပါးစစ်တမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါမေးခွန်းများကိုငယ်ရွယ်သောမဲဆန္ဒရှင်များ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းည့်ကျဇယား လိုက်. ခဲ့ကြသည်။
စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရနက်ရှိုင်းသောနိုင်ငံရေးအရကွဲကွဲပြားပြားရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ရီပတ်ဘလစ်ကန်များ၏ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းကညစ်ညမ်းမှုသည်အမေရိကန်၏လိင်ဘဝကိုပျက်စီးစေသည်ဟုဒီမိုကရက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကသာပြaနာရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
ယောက်ျားယောက်ျားကသာ 28 ရာခိုင်နှုန်းကညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးများ၏ 37 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသူတို့လိင်ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်ဟုနှင့်အတူ, အမျိုးသမီးများထက်ညစ်ညမ်းပိုဒဏ်ခံဖြစ်ကြသည်။
ရိုမန်ကက်သလစ်များသည်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းကသာလျှင်“ ဟုတ်ကဲ့” ဟူသောမေးခွန်းကို“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစစ်အမှန်ဘဝအသက်တာကိုပျက်စီးစေသလား” ဟူသောမေးခွန်းကိုဖြေဆိုခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ev ၀ ံဂေလိတရား ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်မွတ်စလင် ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းကညစ်ညမ်းမှုသည်ပြaနာဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။
ထိုသို့ကောင်းစွာအနေနဲ့ပညာရေးကွာဟမှုရှိပုံရတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းဒီဂရီမပါဘဲသူတို့၏အမျိုးအလေးဆယ်ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းဘွဲ့ရဒီဂရီနှင့်အတူသူတို့၏အမျိုးအသာ 22 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, porn နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည်။
နည်းပညာနှင့်အင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, 40 အောက်မှာအမေရိကန်တွေအွန်လိုင်းယခင်အစဉ်အဆက်ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်တစ်ဦးတည်မြဲသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကစဉ်းစားမိဖို့အများကြီးထွက်ခွာထက် porn ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူ access ကိုရရှိခဲ့တယ်။
အဆိုပါရှားပါးစစ်တမ်းသြဂုတ်လ 11 နှင့်သြဂုတ်လ 18 အကြား nonpartisan ဟင်းရည်စျေးကွက်အားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အသက်အရွယ် 556 အောက်မှာ 40 ဖြေဆိုသူတစ်ဦးကစုစုပေါင်းဖုန်းကျော်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းနှင့်အင်တာနက်ပြားကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျအားစစ်တမ်းကောက်ယူ5ရာခိုင်နှုန်းအမှားတစ်ခုအနားသတ်ရှိပါတယ်။